ရန်ကုန်မှာ ကျွန်တော့် အမျိုးသမီး မွေးဖို့ အချိန်တန်တော့ သားဖွားနဲ့ မီးယပ်ဆရာဝန်မကြီးက ခွဲစိတ်မွေးဖို့ ဘယ်နေ့ မွေးချင်သလဲ လို့ မေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နေ့စေ့ လစေ့ မရောက်ခင် နေ့တစ်နေ့ ရွေးဖို့ လိုလာပါတယ်။ Due Date က တရုတ်နဂါးနှစ် စပြီး တစ်ပတ်လောက် အကြာမှာမို့ နဂါးနှစ်ထဲလည်း ဝင်အောင် အဓိပတိဖွားလည်း ဖြစ်အောင် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက် ကြာသပတေးနေ့ ကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ကြာသပတေးသား မွေးမယ် ကြံထားတော့ သားကို ပေးဖို့ ကြာသပတေးနဲ့ စတဲ့ နာမည်တွေ အတော်များများ ခေါင်းထဲမှာ စဉ်းစားထားဖြစ်ပါတယ်။ လူမင်းက သူ့ကလေးကို ဧဝရက်လူမင်းလို့ ပေးတော့ တို့အလှည့်ကျ ဧဝရက်ထက် မြင့်အောင် မြင်းမိုရ်လို့ ပေးမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ရယ်စရာ ပြောဖြစ်ကြ ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ကလေးက ဇန်နဝါရီ ၂၆ အထိ မနေပါဘူး။ နဂါးနှစ် မဝင်ခင် စနေနေ့ မှာပဲ မွေးလိုက် ပါတယ်။ ကျွန်တော်တောင် ရန်ကုန်ပြန်မရောက်သေးပါဘူး။ စင်ကာပူက တိုက်ရိုက် လေယာဉ်လက်မှတ် မရလို့ ကွာလာလမ်ပူကနေ ပတ်ပြီး ရန်ကုန် ပြန်လာတာမို့ ကလေးမွေးတဲ့ အချိန် ကျွန်တော် ကေအယ်လ်ကို သွားတဲ့ လမ်းမှာပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို မွေးခန်း အပြင်ဖက်မှာ ခေါက်တုံ့ခေါက်ြပန် လမ်းလျှောက် အင်္ဂုလိမာလ သုတ် ရွတ် ဆိုတာမျိုးတွေ မလုပ်လိုက်ရပါဘူး။ ရန်ကုန် ရောက်ပြီးတော့ ဆေးရုံက ဆရာမတွေရဲ့ အပြောအရ ဇန်နဝါရီ ၂၆ မှာမွေးဖို့ ကျွန်တော်တို့လို ကြိုတင်စီစဉ် ထားတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်သား မွေးပြီးတဲ့ အချိန် အဲဒီလို စီစဉ်ထားသူတွေ အားလုံးနီးပါး မွေးပြီးနေကြပြီး ၂ ယောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်လို့ ပြောပြကြပါတယ်။
ရန်ကုန်ရောက်လို့ ကလေးကို တွေ့ပြီးတော့ စင်ကာပူမှာ အတူနေခဲ့ဖူးတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဆီကို ရန်ကုန် ပြန်ရောက်နေတဲ့ အကြောင်း ဖုန်းလှမ်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူက ကလေးမွေးတဲ့ အချိန် လှမ်းမေးပါ တယ်။ နောက်တစ်နေ့ ဇာတာတစ်စောင်နဲ့ အတူ ဆေးရုံကို ရောက်လာပါတယ်။ သူကတော့ ကျွန်တော့်ကို ကြာသပတေးနေ့ မွေးဖို့ ရွေးတဲ့ အတွက် အပြစ်တင်ပါတယ်။ ဇာတာအရ စနေက ကြာသပတေးထက် ပိုကောင်းတဲ့ အကြောင်း၊ ကလေးက သူ့ကံနဲ့သူ လာတာမို့ မင်းတို့ ဘယ်လိုရွေးရွေး သူမွေးသင့်တဲ့ အချိန် ထွက်လာတာပဲလို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောပါတယ်။ သူ့အပြောအရတော့ ကလေးရဲ့ ဇာတာခွင်က အတော်ကို ကောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူက စီးပွားဖြစ် ဗေဒင်ဟောစားတဲ့သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အတော် ထင်ရှားတဲ့ ဗေဒင်ဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ တပည့်ရင်းပါ။ အခု သူဗေဒင်ကို စွန့်လွတ်ပြီး တရားထိုင်နေတာ အတော်ကြာပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်နဲ့က သူငယ်ချင်း အရင်းမို့ ကျွန်တော့် သားအတွက် သူတွက်ကြည့်ပေးတာလို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီနောက်တော့ ကလေးကို နာမည်ပေးဖို့ ကိစ္စစဉ်းစား ဖြစ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်က နာမည်နောက်မှာ အဖေနာမည် ထည့်ပေးတဲ့ အလေ့အထကို သဘောမကျပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်တွေ တရုတ်တွေ မှာ ဆာရ် နိမ်း ရှိပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမှာ ဆာရ်နိမ်း ဆိုတဲ့ အလေ့အထ အရင်ကတည်းက မရှိခဲ့ပါဘူး။ အခုအချိန်မှ ထထွင်ရင်လည်း ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ဥပမာ အဖေနာမည် ဦးသီဟမို့ သားနာမည် နောက်မှာ သီဟ ထည့်ပေးပေမယ့်လည်း ဦးသီဟ ဆိုတာက တစ်ယောက်တည်း ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြား ဦးသီဟ နာမည်နဲ့လူတွေ အများကြီး ရှိပါ သေးတယ်။ အဲဒီသူတွေကလည်း သူတို့ သားသမီးကို သီဟနဲ့ ဆုံးတဲ့ နာမည် ထည့်ပေးကောင်း ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ သီဟနဲ့ ဆုံးရင် ငါ့အမျိုးပဲလို့ နောက်လူတွေက ကောက်ချက်ချရင် လွဲကုန်ပါလိမ့်မယ်။ အဖေနာမည် ပါချင်လို့ သက်သက် ထည့်ပေးတာ ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
နာမည်ပေးဖို့ အတွက် ကျွန်တော်သိတဲ့ နည်းစနစ်က နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ ပထမတစ်နည်းက မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာဘုတ် နည်းပါ။ ကလေးရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်ကို ၇ နဲ့စား အောင်လံထူစစ်သူကြီးပွဲ လင်္ကာအတိုင်း မဟာဘုတ်တိုင်ထူ ပြီး အထွန်း၊ သိုက်၊ ရာဇ၊ အဓိပတိ ကျတဲ့ နေ့နံတွေကို ရွေးပြီး ပေးတဲ့နည်းပါ။ ဒီနှစ်က မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၃ နှစ်မို့ ၇ နဲ့ စားရင် ၁ ကြွင်းပါတယ်။ အဲဒီတော့ မဟာ ဘုတ်တိုင် ထူရင် အောက်က အတိုင်း ရပါတယ်။
ကလေးက အထွန်းဖွား စနေသားမို့ စနေနဲ့ စပြီး သိုက်၊ ရာဇ၊ အဓိပတိ ကျတဲ့ အင်္ဂါ၊ သောကြာနဲ့ ကြာသပတေးနံတွေနဲ့ တွဲပြီး ပေးဖို့ပါ။ အဲဒါကတော့ မဟာဘုတ်နည်းပါ။
၁ တနင်္ဂနွေ အ ဧ ဩ
၂ တနင်္လာ က ခ ဂ ဃ င
၃ အင်္ဂါ စ ဆ ဇ ဈ ည
၄ ဗုဒ္ဓဟူး လ ဝ
၅ ကြာသပတေး ပ ဖ ဗ ဘ မ
၆ သောကြာ သ ဟ
၇ စနေ တ ထ ဒ ဓ န
၈ ရာဟု ယ ရ
နောက်တစ်နည်းက မင်းသိင်္ခရဲ့ ၅၊၆၊၂ နည်းပါ။ မင်းသိင်္ခရဲ့ တွက်နည်းအရ မွေးနံကို ၁ ထားပြီး ၅ ခုမြောက်နေ့နံ၊ ၆ ခုမြောက်နေ့နံ၊ ၂ ခုမြောက်နေ့နံတွေနဲ့ နာမည်ကို စီဖို့ပါ။ ဥပမာဆိုရင် မင်းသိင်္ခရဲ့ နာမည် အရင်းက အောင်ထွန်း (တနင်္ဂနွေသား) ပါ။ အဲဒီတော့ တနင်္ဂနွေကို ၁ ထားပြီး ငါးခုမြောက် ကြာသပတေး (မင်း)၊ ၆ ခုမြောက် သောကြာ (သိင်) နဲ့ ၂ ခုမြောက် တနင်္လာ (ခ) တွဲပေးထားပါတယ်။ မင်းသိင်္ခပေးခဲ့တဲ့ နာမည်တွေ အဲဒီနည်း နဲ့ ပေးထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဥပမာ ကြည့်ရင် နော်လယ်ထူး (ဗုဒ္ဓဟူးသမီး) ဆိုတဲ့ နာမည်မှာ ဗုဒ္ဓဟူးကို ၁ ထားပြီး ၅ ခုမြောက် တနင်္ဂနွေ (အေး)၊ ၆ ခုမြောက် တနင်္လာ (ချမ်း)၊ ၂ ခုမြောက် ကြာသပတေး (မေ) ဆိုပြီး အေးချမ်းမေကို မင်းသိင်္ခ နာမည်ပေးခဲ့တာလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ၅၊၆၊၂ နည်းကို သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။ နေ့နံမကိုက်တာက တစ်ကြောင်း၊ ၅၊၆၊၂ နံမည် ရှိတဲ့သူတွေက အတက်အကျ ကြမ်းတယ်လို့ ထင်တာက တစ်ကြောင်း မို့ပါ။
အရင် တူတစ်ယောက် တူမတစ်ယောက်ကို မဟာဘုတ်နည်းနဲ့ နာမည်ပေးခဲ့ဖူးပေမယ့် ကလေးကို ကျွန်တော်နာမည်ပေးမယ် လုပ်တော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းက အတင်း ဖျက်ပါတယ်။ သူကတော့ နာမည်ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ အရာမို့ ရမ်းသမ်း မပေးသင့်တဲ့ အကြောင်း တရားချပါတယ်။ သူ့ကို နာမည်ပေးခိုင်းဖို့ ကျပြန်တော့လည်း အရင်တစ်ခါ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် သမီးကို နာမည်ပေးဖို့ သူ့ကို အကူအညီ တောင်းခဲ့ဖူးတာကို သတိရပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စမို့ သူ မလုပ်ချင်ဘူး ဆိုပြီး ငြင်းခဲ့ဖူးတာမို့ ဒီတစ်ခါလည်း သူနာမည် ရွေးပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး မြို့ထဲက နာမည်ကြီး ဗေဒင်လက္ခဏာဆရာ တစ်ယောက်ဆီကို ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီ ဆရာဆီမှာ နာမည်ပေးရင် ရိုးရိုးကို ကျပ်တစ်သောင်း၊ ရှယ် ဆိုရင် ကျပ် နှစ်သောင်း ကျပါတယ်။ ရိုးရိုးပေးမလား ရှယ်ပေးမလား ဆိုတော့ ၂သောင်းတန် ရှယ်ကိုပဲ ရွေးလိုက်ပါတယ်။ အဖေအမေနာမည်၊ မွေးတဲ့အချိန်၊ မွေးရပ်၊ စတာတွေကို မေးပြီးတော့ ၃ ရက်ကြာရင် လာပြန်ယူလို့ ချိန်းလိုက်ပါတယ်။ ပြန်ခါနီးမှ ယောက်ျားလေးလား မိန်းကလေးလား မေးဖို့ သတိရသွားတာမို့ ပြုံးမိပါသေးတယ်။ အဲဒီဆရာက ကျွန်တော့် တူမတစ်ယောက်ကို နာမည် လှလှကလေး တစ်ခု ပေးဖူးတာမို့ သူပေးတဲ့ နာမည်က လှလှကလေး ထွက်လာမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
အဲဒီက ပြန်လာပြီးတော့ နောက်တစ်နေ့ မိတ်ဆွေ တစ်ချို့နဲ့ နာမည်အကြောင်း စကားပြောဖြစ် ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က ဗေဒင်နဲ့ ပေးမယ် ဆိုရင် နောက်တစ်ယောက် ထပ်အပ်လိုက်၊ ပြီးမှ ကြိုက်တဲ့နာမည် ရွေးလို့ အကြံပေးတာကြောင့် အိမ်နားက နိုင်ငံကျော် ဗေဒင် လက္ခဏာ ဆရာ တစ်ယောက်ဆီကို ရောက်သွားပြန်ပါတယ်။ သူနဲ့တော့ လူကိုယ်တိုင် မဆုံလိုက်ရပါဘူး။ သူ့ရဲ့ စာရေးဆီမှာပဲ အချက်အလက်တွေပေးပြီး ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကြာမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူ့ဆီမှာတော့ ကျပ် တစ်သောင်း ကျပါတယ်။
ပထမ ဗေဒင်ဆရာက နာမည် ၃ ခု ရွေးပေးပြီး၊ ဒုတိယ ဗေဒင် ဆရာက နာမည် ၆ ခု ရွေးပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တစ်ခုမှ မကြိုက်ပါဘူး။ နာမည်တွေက ရိုးလွန်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်တူ တူမတွေ တုန်းကတော့ နာမည် အဆန်းတွေ ပေးတဲ့ ဗေဒင် ဆရာတွေ ကိုယ့်အလှည့်ကျမှ ဘယ်နှယ့်ကြောင့် နာမည် ခပ်တုံးတုံးတွေ ပေးရသလဲလို့ စဉ်းစား မရ ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ဗေဒင်ဆရာတွေက နာမည်တွင် မကဘူး သူတို့ နာမည်ပေးတဲ့ နည်းစနစ် တွေကိုပါ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ နာမည်ပေးတဲ့ နည်းစနစ်တွေကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ဖတ်ပြီး ဘယ်နည်းစနစ် ကောင်းသလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့ မရပါဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘော်ဒါကြီးနဲ့ ပြန်တိုင်ပင် ရပါတယ်။
သူက အဲဒီဗေဒင်ဆရာ နှစ်ယောက် ပေးတဲ့ နာမည်တွေကို ကြည့်ပြီး ခေါင်းခါပါတယ်။ ဘယ်နှယ့်ကြောင့် ဒီနာမည်တွေ ပေးရတာလဲ မသိဘူး။ မကောင်းဘူးလို့ သူက ပြောပါတယ်။ နောက်တော့ သူက ကျွန်တော့်ကို မဟာဘုတ်၊ အင်္ဂဝိဇ္ဇာ ဆပွတ်တိုင် နဲ့ ကလေးရဲ့ ဇာတာခွင်ကို ချရေးပြီး သူ့ အယူအဆတွေကို ရှင်းပြပါတယ်။
မဟာဘုတ်နည်း အရ စနေ၊ အင်္ဂါ၊ သောကြာ၊ ကြာသပတေး နံတွေက ကောင်းပေမယ့် အင်္ဂဝိဇ္ဇာ ဆပွတ်တိုင်မှာတော့ အင်္ဂါနဲ့ သောကြာက နင်းကြမ်း ဖြစ်နေ (အောက်ကျနေ) ပါတယ်။ အဲဒီတော့ နာမည် အတွက် ရွေးစရာ စနေနဲ့ ကြာသပတေး နှစ်ခု ပဲ ကျန်ပါတယ်။ ကြာသပတေးက ဓမ္မာ သောက အင်းဝ ရာဇာဆိုတဲ့ စာချိုး အတိုင်း ရန်ဘက် ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်က သူ့ကို ဓမ္မာ သောက က အိမ်ထောင်ရန်ပဲ ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ ကွန်ပလိန်း တက်တော့ သူက ရန်ဆိုရင် ဘာရန်မှ မကောင်းဘူးလို့ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဇာတာခွင်မှာ ကြာသပတေးက ပါပဂြိုဟ် ဖြစ်နေလို့ မရွေးသင့်ဘူးလို့ ထောက်ပြပါတယ်။
မိတ် အောင်ပ ကုလား ဆွေသား တော်ရင်း
ရန် ဦးညို ခေမာ သုတာ ဝေရီ
အိမ်ထောင်မိတ် ဥဿာ စိန်ပန်း ဒန်းလှ ကိုရှာ
အိမ်ထောင်ရန် ဓမ္မာသောက အင်းဝ ရာဇာ
ဓာတ်မိတ် အန္တော ဂဗ္ဘေ စရေ ဝံသေ
ဓာတ်ရန် ဦးဝေ စံကူး ရေဘူး တောသူ
အဲဒီတော့ နောက်ဆုံး ရွေးစရာ စနေ တစ်ခုပဲ ကျန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက စနေနံ တစ်ခုတည်းနဲ့ နာမည်ကို ပေးဖို့အတွက်လည်း အားမပေးပါဘူး။ မဟာဘုတ်တိုင်က နှစ်တိုင်း လည်နေတာမို့ မဟာဘုတ်တိုင်အရ စနေဂြိုဟ် အောက်တန်း ရောက်တဲ့ နှစ်မှာ တခြား ဂြိုဟ်ခွင်တွေက ပြန်ထိန်းပေးဖို့ လိုတယ် ပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ စနေနဲ့ တွဲဖို့ နေ့နံ ရွေးဖို့ လိုလာပါတယ်။ အင်္ဂဝိဇ္ဇာမှာ ကောင်းတဲ့ နေ့နံက မဟာဘုတ်မှာ မကောင်း၊ မဟာဘုတ်မှာ ကောင်းတဲ့ နေ့နံက အင်္ဂဝိဇ္ဇာမှာ မကောင်း ဖြစ်နေတာမို့ အဲဒီအထဲက အကောင်းဆုံးနေ့နံ တစ်ခုကို ရွေးဖို့ ရှာတော့ ဗုဒ္ဓဟူးကို တွေ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးက မဟာဘုတ်မှာ မရဏ ရောက်နေပေမယ့် အင်္ဂဝိဇ္ဇာမှာတော့ ဆပွတ်တိုင် ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါအပြင် ဥဿာ စိန်ပန်း ဒန်းလှ ကိုရှာ ဆိုတဲ့ လင်္ကာအတိုင်း စနေနဲ့ မိတ်ဘက် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သူ့ရဲ့ ဇာတာခွင်မှာ ရာဟု ဥစ် ရထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရာဟုက သူ့ကို မကောင်းကျိုး ပေးမယ့် ဂြိုဟ် မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဗုဒ္ဓဟူးနံ လ၊ဝ ကို တိုက်ရိုက်မရွေးပဲ ရာဟု ဖြစ်တဲ့ ရ၊ယ ကို ရွေးမယ်လို့ ကြံကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စနေနံမှာ ပြောစရာ ရှိပါသေးတယ်။ စနေနံရဲ့ အက္ခရာက တ၊ထ၊ဒ၊ဓ၊န ပါ။ နာမတြ ဆန်းကျမ်းဆိုတဲ့ နာမည်ပေးတဲ့ ကျမ်းအရ တ နဲ့ စတဲ့ ကလေးဟာ အသားအရောင် လုံးဝ ဖြူဆွတ်နေရပါမယ်။ ဝါဝင်းတဲ့ အသား၊ အနေတော် အသားအရေ ဆိုရင် ထ နဲ့ ဒ ကို ရွေးရပါတယ်။ ဓ နဲ့ နကတော့ အသားမည်းတဲ့သူနဲ့ ကိုက်ပါတယ်။ ကလေးက လုံးဝ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူတဲ့ အသားအရောင် မဟုတ်မှာ သေချာတာကြောင့် ထ နဲ့ ဒ ထဲက တစ်လုံးနဲ့ စပြီး ပေးရမယ် လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ထ၊ ဒ တစ်လုံးလုံးနဲ့စပြီး ယ၊ရ တစ်လုံးနဲ့ ဆုံးရမယ်လို့ ကောက်ချက်ဆွဲလို့ ရပါတယ်။ အစမှာ ထဆင်ထူး ဒဒွေးနဲ့ စပေမယ့် နောက်က လိုက်တဲ့ စာလုံးမှာတော့ စနေနံ ကြိုက်တဲ့ အလုံးကပ်လို့ ရတယ်လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။ အဆုံးကိုတော့ ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ ဆုံးပေးဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ နာမည်က အဲဒီ အတိုင်း ဆိုရင် ပေးဖို့ ခက်တာက တစ်ကြောင်း၊ ပထမ ဗေဒင်ဆရာ ပေးတဲ့နာမည်တွေမှာ စနေပြန်ပိတ်ထားတဲ့ နာမည်တွေ ပါတာက တစ်ကြောင်းမို့ ဗုဒ္ဓဟူးကို အလယ်ထား စနေနဲ့ ပြန်ပိတ်လို့ ရမလားလို့ စောဒက တက်ကြည့်တော့လည်း သူက နာမည်ဆိုတာ အင်္ဂဝိဇ္ဇာမှာ အညွန့် ဖြစ်နေရမယ်။ စနေနဲ့ ပြန်ပိတ်ရင် အောက်ပြန်ကျပြီး အညွန့် မဖြစ်တော့ဘူးလို့ ရှင်းပြပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အလယ်ခေါင်ကနေ ထည့်ဖို့ နောက်တစ်လုံးကို စဉ်းစားရပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူက ကျွန်တော့်ကို ကလေး ဘာဖြစ်မယ်လို့ ထင်သလဲလို့ မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဒုတိယ ဗေဒင်ဆရာရဲ့ ဇာတာ အဟောမှာ အင်္ဂါနံ အလုပ်အကိုင်နဲ့ အကျိုးပေးမယ်လို့ ဟောထားတာ ပါတဲ့အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် အင်္ဂါကို အလယ်က တစ်လုံးထည့်ပေးလို့ သူက ကျွန်တော့်ကို အကြံ ပေးပြန်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အင်္ဂဝိဇ္ဇာမှာ အင်္ဂါက အောက်ဖက် ရောက်နေပေမယ့် မဟာဘုတ်မှာ အင်္ဂါက သိုက်ဖြစ်နေတာ က တစ်ကြောင်း၊ သူ့ရဲ့ ဇာတာခွင်မှာ အင်္ဂါဂြိုဟ်က အရမ်းကို အားကောင်းနေတာက တစ်ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ ရှေ့က ကပ်လိုက်ရင် အန္တော ဂဗ္ဘေ စရေ ဝံသေ ထဲက စရေ ဆိုတဲ့ ဓာတ်မိတ်တွေ ဖြစ်နေတာက တစ်ကြောင်းမို့ အင်္ဂါ ထည့်ရင် ရမယ်လို့ သူက အကြံပေးပါတယ်။
အဲဒီတော့ တ၊ထ နဲ့စ အင်္ဂါနံကို အလယ်ကခံ ရ၊ယ နဲ့ ပိတ်ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံး အတည်ပြုချက် ရပါတယ်။ သူနဲ့ တွေ့လို့ အိမ်ပြန်အရောက်မှာ စဉ်းစားစရာ သိပ်မကျန်တော့တာမို့ အဲဒီ အတိုင်း နာမည် တစ်လုံး ရွေးဖြစ်သွားပါတယ်။ သူဒီလောက် ပြောထားတာတောင် ကျွန်တော်က စိတ်တိုင်း မကျသေးပါဘူး။ ပထမ ဗေဒင်ဆရာ ပေးတဲ့ နည်းတွေထဲက ဂဏန်းဗေဒင် နည်းနဲ့ ပြန်ကိုက်ကြည့်မိ ပြန်ပါတယ်။ ဂဏန်းဗေဒင်နည်း အရ အင်္ဂလိပ်လို နံမည်ကို ပေါင်းကြည့်ရင် သူမွေးတဲ့ ဂဏန်းနဲ့ ကိုက်ရမယ်လို့ ပထမဗေဒင် ဆရာက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဥပမာ အောင်ထွန်း ဆိုတဲ့သူက ၁၂ ရက်နေ့မှာ မွေးရင် ၃ ဂဏန်းသမားပါ။ နာမည်ကို အားလုံးပေါင်းပြီး မွေးဂဏန်းနဲ့ ညီဖို့ ထွန်းကို TUN နဲ့ ပေါင်းမှ ညီပါတယ်။ HTUN နဲ့ ဆိုရင် မညီပါဘူး။ အဲဒီတော့ သူ့နာမည် အတည့်အတိုင်း မပေါင်းဘဲ မွေးဂဏန်းနဲ့ ညီအောင် နည်းနည်း အကြံအဖန် လုပ်ပြီး ပေါင်းရပါတယ်။
A U N G T U N
1+6+ 5+3 + 4+6+5 =30 (3 + 0) = 3
1 A I J Q Y
6 U V W
နာမည်ကို ရွေးပြီးတော့ သူ့ဆီကို လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ သူက နာမတြ ဆန်းကျမ်းနဲ့ ပြန်တိုက်စစ်ပြီး ရွေးထားတဲ့ နာမည်အရ ၆ ပေခွဲ လောက် အရပ်ရှိမှ ကိုက်မယ်၊ မဟုတ်ရင် မကိုက်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် နည်းနည်းပြန်ပြင်လိုက်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က ခေါင်းထဲမှာ ပြင်ပြီးသားနာမည် အသင့်ရှိတာနဲ့ သူ့ကို ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူက စာအုပ်ပြန်လှန်ပြီး နာမတြ ဆန်းကျမ်းထဲက အချက် ၁၀ ချက်မှာ ၉ ချက်နဲ့ ညီတယ်။ အင်္ဂဝိဇ္ဇာတိုင်မှာ အပေါ်ကို တည့်တည့်မတက်ပဲ အောက်ကနေ ပတ်တက်တဲ့ အတွက် အရမ်း အဆင့်မြင့်တဲ့ အလုပ်အကိုင်၊ ပညာရေးလို ကိစ္စမျိုးမှာ အနောက်အယှက် ရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့။ သူ့ဇာတာခွင်က အရမ်းကို ကောင်းလွန်းလို့ ကျော်နိုင်မှာပါ လို့ အကြံပေးပါတယ်။ ၁၀ ချက်မှာ ၉ ချက်နဲ့ ညီတယ် ဆိုပေမယ့် နောက်တစ်ချက်က မညီတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သွားကိုကြည့်ပြီး ပြောရတာမို့ ကလေးက သွားမပေါက်သေးတော့ ပြောမရပါဘူး။
ပထမ ဗေဒင်ဆရာပေးလိုက်တဲ့ ဟောစာတမ်းမှာ မှတ်သားစရာ အချက်တစ်ချက် ပါပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက နာမသိဒ္ဓိ ဇာတ်တော်မှာ နာမည်ကြောင့် ကံဆိုးကံကောင်း မဖြစ်နိုင်၊ နာမည်ကြောင့် ကံမပြောင်းနိုင်ဘူးလို့ အတိအလင်း ဟောကြားခဲ့တယ်လို့ ဗေဒင်ဆရာက ဟောစာတမ်း အောက်ဆုံးမှာ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဗေဒင်ဆရာဆီမှာ နာမည် သွားပေးတယ် ကြားတော့ အဖေက နာမည်ဆိုတာ ပညတ်သာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ပရမတ် မဟုတ်တဲ့ အတွက် အရေးမကြီးကြောင်း တရားချ ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံးကလည်း နည်းနည်း ရွတ်တွတ်တွတ် ရှိပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တာတောင် ပြဿဒါးနေ့မှာ ဆောင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့် အတွက် မဟုတ်ဘဲ ကလေးအတွက်မို့ မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်နည်းနဲ့ ပေးရင် ကောင်းမယ်လို့ ယူဆပြီး နောက်ဆုံးတော့ တ၊ထ နဲ့ စပြီး အင်္ဂါနံ အလယ်မှာခံ ရ၊ယ နဲ့ ဆုံးတဲ့ နာမည်တစ်လုံး ရွေးဖြစ်လိုက် ပါတော့တယ်။
Posted by ZT at 11:44 PM
ကြန္ဂရက္က်ဴေလးရွင္းပါ ခင္ဗ်ာ။ ေဗဒင္ပညာကိုေတာ့ ခုမွပဲ စိတ္၀င္တစား ဖတ္ဖူးေတာ့တယ္....
and huuuuu for complex naming system :)
အေတာ္ရႈပ္တာပဲ။ ေနျခည္႕ကိုေတာ့ စေန၊တနလာၤတြဲရမယ္လို႕ ေဗဒင္က ေဟာလို႕ ေနျခည္ ျဖစ္လာတာ း)
ေအာက္ပိုင္းေလး နည္းနည္းေက်ာ္ဖတ္သြားတယ္။ ေနာက္မွ ျပန္ဖတ္ေတာ့မယ္...
ျမန္မာ့ရိုးရာ အမည္ေပးစနစ္က ရႈပ္ေထြး ခက္ခဲတယ္ဆိုတာ ခုမွ ေသခ်ာသိသြားျပီ။
အားလံုးကို ရႈပ္ေနတာပဲ... :D
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သားေလးက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တူေလးေပါ႔.. ဘာနာမည္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေဖ့ထက္ကို ညဏ္ပညာနဲ႔ သဒၶါတရား ၾကီးမားမွာ အမွန္ပါပဲ...
ေသခ်ာဖတ္ျပီး ကြကိုယ္ နာမည္ျပန္ေပးၾကည့္မလားလို႔ စဥ္းစားေနတာ.. ဖတ္ရင္းနဲ႕ မူးသြားျပီ :D
Tx:0 u ,man!
Super like! :lol
ကိုယ္တိုင္လည္း နာမည္က ေန႕သင္႕နံသင္႔ မဟုတ္ပါဘူး
ဒါေပမဲ႔ ဒီပိုစ္႔ဖတ္ျပီး ဖခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေမတၱာကိုေတာ႕ ေကာင္းေကာင္းၾကီး ရွာေဖြေတြ႔ရွိသြားတယ္ရွင္။